HGH Singapore - Xagee laga iibsadaa Maqaarka Aadanaha ee Singapore?
By HGH Thailand Waxaa laga yaabaa 30, 2018
1. Halkee baan ka iibsan karaa HGH ama bixiyaha Horumarka Aadanaha ee Singapore?
2. Nooca ugu fiican ee HGH ee Singapore
2.1 Dammaanadda tayada sare ee hoormoonka koritaanka dadka
2.2 Isticmaalka fudud HGH Genotropin qalinka
2.3 Kaydinta fudud
2.4 Socdaalka HGH ee diyaaradda iyo garoonka diyaaradaha
3. Waa maxay HGH (Somatropin)?
3.1 Isticmaalka HGH ee isboortiga
3.2 Daaweynta jilibka iyo caawinta hormoonka koritaanka
3.3 HGH ee Jirka
3.4 Sidee hormoonka koritaanka ugu shaqeeyaa koritaanka muruqa?
3.5 Daaweynta cayilka iyo miisaanka luminta
3.6 Daaweynta dadka da'da ah ee da 'yarta ah ee Singapore
4. Dhibaatooyinka kale ee hormoonka koritaanka
5. Qiyaasta HGH
6. HGH qiimaha Singapore iyo hababka bixinta
6.1 Diiwaanka bil kasta ee hormoonka koritaanka ee Singapore
HGH bixiyaha Singapore
HGH th Pharmacy waa mid ka mid ah farmashiyada hoormoonka hormoonada aadanaha oo si sharci ah u taageera macaamiisha u baahan baahida somatropin aduunka oo dhan oo ay ku jiraan bukaanada ka yimaada Singapore. Dhamaan diyaarinta hormoonka koritaanka waa sharci ahaan labada sharci ee Thailand iyo Singapore, haystaan ​​shahaadooyin tayo iyo liisan.
Bukaanada ka yimaada Singapore waxay la tashan karaan oo ay ku heli karaan daroogada Bangkok ee xafiiskayaga iyo kumbuyuutar keena iyo ka bixida khabiiradayada cinwaankaaga kuwaas oo si naxariis leh u tusi doona sida loo qaato HGH irbadaha, sidoo kale waxaad ka dalban kartaa hormarinta internetka hormoonka koritaanka ee Singapore ee ka yimaada Thailand oo xaq u leh albaabka gurigaaga, dhammaan wadatashiyada, talooyinka ku saabsan qaadashada iyo qiyaasta amarka iyo lacag bixinta ayaa laga sameyn karaa internet la'aan adiga oo ka tagaya guriga.
Farmashadayadu waxay qabataa dhammaan waajibaadka ah ee helitaanka helitaanka hormoonada hormoonnada ee Singapore, dhoofinta dhoofinta iyo nadiifinta.
Waa maxay nooca ugu fiican ee HGH ee Singapore?
Sida laga soo xigtay macaamiisheena ka kala yimid adduunka oo idil, oo ay ku jiraan bukaanka ka yimaada Singapore, hormoonka kobcinta bini'aadamka ugu fiican ayaa ah sheyga shirkadda Pfizer - Genotropin GoQuick Pen 12mg (36IU) ee tayada yurub ee soo saara talyaaniga oo aan ku soo dejinno Thailand, sidaas darteed waan fahmi doonaa sababta Genotropin waa u fiican tahay?
Dammaanadda tayada sare ee hoormoonka koritaanka dadka
Laga soo bilaabo shirkadda Europe ee ugu horeysa ee dawooyinka iyo qalabka daawada - Pfizer waxay ku kalsoon tahay tayada sare ee hormoonka koritaanka
Hab fudud isticmaalka HGH Qalabka Genotropin
Helitaanka isticmaalka hoormoonka hormoonka koritaanka genotropin iyo gaadiidka ayaa u qalma taxadar gaar ah. Diyaarinta hormoonka hormoonada koritaanka waxay qaadataa daqiiqado 2 oo kaliya, soo saarayaasha germotropin ayaa daryeelay fududaynta iyo fududaanta isku dhafka xakameynta cirbadda iyo budada hoormoonka koritaanka, iyada oo la qiyaaso qiyaasta saxda ah ee daroogada.
Qalabka gacanta ayaa loo maleynayaa in faahfaahinta ugu yar ee hore ay ku jirto xalka laysku daro iyo hormoonka koritaanka - waxaad isku dari kartaa adigoo boodbada ka soo jiidaya booska abc si aad u qadiso qiyaasta tusaale ahaan 0.6 ama 0.9 ml guji badhanka - guji oo waadna qabatay!
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan isku dardarka, arag maqaalkan
Qalinka hormoonada koritaanka waxaa lagu sameeyaa difaaca difaaca, ka dib marka la isku daro hoormoonka koritaanka, waa in lagu keydiyaa heerkulka 8-12, adigaa iska saar cirbadda, ku rid kabka difaaca oo kaliya ku rid qaboojiyaha
Socdaalka HGH ee diyaaradda iyo garoonka diyaaradaha
Qaar ka mid ah macaamiisha ka yimaada Singapore waxay jecel yihiin in hormoonka koritaanka laga qaado Thailand ilaa Singapore ama safarka, kuwaas oo ah inay qaadaan diyaarad. Si ka duwan sida khatarta ah ee khatarta ah ee khatarta ah ee Shiinaha, uma baahnid inaad qaadato qalabka gargaarka degdegga ah - cirbadaha, ampoules, dhalooyinka oo mar kale keeni kara shaki ku jira caadooyinka ama baahida loo qabo in la keeno dukumentiyo dheeraad ah.
Genotropin qalin aad si fudud u geliso boorsooyinka ama boorsada gacanta oo ay iska illowdo, oo lagu daro
Genotropin ma qaato meel bannaan oo aan ku jirin galaas jilicsan oo sii kordhaya halista waxyeellada
Waa maxay HGH (Somatropin)?
Hormo kobcin ama somatotropin waa mid ka mid ah hormoonada ugu muhiimsan dadka ka soo jeeda qaybta hore ee pituitary. Somatotropin waxay kor u qaadaa tallaalka anaboleed, waxay xawaareysaa kobcinta wax soo saarka borotiinka ee unugyada cusub, waxay saameeysaa hoos u dhigidda baruurta subagga, subagga ayaa kordhiya saamiga muruqyada baruurta. Waxay leedahay saamayn bogsashada ka dib dhaawacyada iyo gubashada maqaarka, daaweynta cudurada lafaha.
Maxay muhiim u tahay haweenka iyo raga labadaba, waxay u dhaqmaan sida wakiilo awood leh oo ka hortagaya, waxay fududeeyeen dib u-diiwaangelinta iyo beddelidda unugyada hore ama dhimashada kuwa cusub. Xaqiiqda, hoormoonka koritaanka waa daawo cusub oo mustaqbalka ah, taas oo ah sababta ugu weyn ee mamnuucida iibinta tooska hormoonka koritaanka.
Shaqooyin badan oo casri ah oo cilmi baaris ah oo ku saabsan hormarinta daawooyinka iyada oo saldhig u ah hormoonada koritaanka ee dadka cayilan, daawo loogu talagalay jidh-dhiska jirka iyo sida "ilo dhalinyaranimo" oo ah daroogada daandaansiga ah.
Isticmaalka HGH ee isboortiga
Ciyaaryahano badan oo ka yimaada Singapore waxay isticmaalaan hormoonada koritaanka si ay uga soo kabtaan dhaawacyada iyo dhaawacyada la xiriira dhaawacyada isboortiga halista ah sida boorka, dagaalyada aan lahayn xeerarka, kubbadda koleyga, kubadda cagta iyo ciyaaraha kale ee ciyaaraha isboortiga badanaa ku dhacaan dhaawacyo, murgacasho iyo jilicsanaan. HGH waxay kaa caawin kartaa inaad dhakhso u bogsato.
Daaweynta jilibka iyo caawinta hormoonka koritaanka
Ciyaartoyga xirfadleyda ah dhamaadka xirfad-ciyaareed kubbadda cagta ah ee xanuunka ku dhaca xubnaha, jilbaha iyo dhabarka. Daaweynta xinjirta leh hormoonka koritaanka ayaa muujinaya natiijooyin aad u fiican - tusaale ahaan, bukaanka soo maray jilibka ama dhabarka
Xanuun ka dib markii todobaadyada 2 ee bilawga qaadista hormoonnada hormoonada koritaanka ayaa bilaabanaya in ay dareemaan horumar wax ku ool ah, ka dib markii 1 bishii xanuunku si buuxda u dhaafto, bukaanadu waxay sii wadi karaan inay ku raaxaystaan ​​nolosha iyo firfircoonida nasashada iyo ciyaaro ciyaaro iyagoon wax dhibaato ah
HGH ee Jirka
Waxaa laga yaabaa in codsiga ugu caansan hormoonada koritaanka uu ku jiray jirdhiska jirka sida ciyaartoyda xirfadleyda ah iyo kuwa bilowga ah ee jimicsiga ee lumay miisaanka xad-dhaafka ah, dufanka hoose ee subagga iyo koritaanka muruqa.
Hormoonka koritaanka wuxuu leeyahay saameyn xoog leh oo ah anabolic, laakiin ka duwan noocyada kale ee steroids, waxaa si fiican u badbaado isticmaalkiisa sababtoo ah waxay leedahay qaabka hormoonka hormoonka koritaanka ee qanjirka pituitary.
Bukaanku wuxuu magdhowayaa wax soo saarka dabiiciga ah ee hoormoonka koritaanka, taas oo hoos u dhacaysa ka dib sanado 25 oo uu sii wado inuu si joogta ah u hoos u dhaco ilaa qofku da 'weyn yahay. Malaha taasi waa sababta dhalinyarada da'doodu ka hooseyso 25 ay si fudud u gaari karaan natiijooyinka wanaagsan ee jirka.
Sidee hormoonka koritaanka ugu shaqeeyaa koritaanka muruqa?
Hormar kobcis ah oo jimicsi firfircoon ku leh culeysyada jimicsiga iyo korontada oo leh nafaqo haboon oo leh quwad sare oo borotiinka iyo amino acids - dhowr jeer waxay kordhisaa unugyada unugyada, muruqyada muruqyada, beddelidda unugyada jirkooda leh kuwa cusub - waa hormoon korriin ah waa lebbiska ugu muhiimsan dhismaha jirkaaga riyadiisa
Daaweynta cayilka iyo miisaanka luminta
Xaqiiqooyinka ugu muhiimsani waa xidhiidhka cayil ee qofka ka dib sanado 25 - jirku wuxuu si firfircoon u bilaabaa inuu ururiyo kaydka dufanka ee bararka, caloosha iyo lugaha - waa mid aad u fudud in hormoonka koritaanka si toos ah u saameynaya dheef-shiid kiimikaadka, ka dib sanado 25 koritaanka hoormoonka koritaanka jirka ayaa hoos u dhacaya waqtiyada ka sii weyn marka loo eego ragga da'doodu ka weyn tahay heerka is-kicinta ee hoosta iyo jidhka
Daaweynta dadka da'da ah ee da 'yarta ah ee Singapore
Nasiib darro jidhkeenu wuxuu leeyahay kheyraadkii saacadaha nafleyda iyo sida wax kasta oo nool oo aan nooleyn dhulka ku jira waa la bedeli karaa iyo gabow. Qofka wuxuu ku koraa gabow sababtoo ah xirashada iyo jeexashada unugyada, muruqyada, dib u soo celinta qiyaasta unugyada cusub si ay u beddelaan kuwii hore iyo qofka ayaa bilaaba inuu da 'weynaado oo uu xirto.
Hormo kobcinta ayaa kicisaa xoqidda iyo dhismaha unugyada cusub, unugyada iyo xeryahooda. Kadib 1 ka dib, waxaad ku aragtaa hagaajinta qaabka timaha, maqaarka, ciddiyaha. ka soo baxay.
Haa, waxaa ku mahadsantahay cirbadeynta hoormoonka koritaanka ee dhaqsigu uu bilaabmayo nadiifin caalami ah, bedelida unugyada gaboobay ee cusub iyo qofka ayaa waxa ugu muhiimsan - dhalinyarada, quruxda iyo caafimaadka
Dhibaatooyinka Dhibaatada Horumarka Aadanaha
Horumarka Hormoonku wuxuu ka kooban yahay amino acids 191 oo la mid ah hormoonada koritaanka dabiiciga ah ee uu soo saaro qanjirka pituitary. Hormo kobaca ayaa leh wax saameyn ah oo aan sidaa u badneyn, waana mid ammaan ah labadaba qof weyn iyo carruurta leh hormoonka koritaanka hormoonka
Caadi ahaan soo dhaweynta hormoonka koritaanka waxaa loo qaybin karaa qaybaha 3:
- Koorsada HGH ee dhiska jirka
- Daaweynta cayilka iyo dufanka xad-dhaafka ah
- Daaweynta gabowga gabowga
Nidaamka caadiga ah ee koorsada koritaanka hormoonka waa
3 IU subax kasta oo calool madhan ama ka hor wakhtiga jiifka
loogu talagalay dadka ka weyn 30 da'da miisaanka ilaa xNUMX kg
ama 4 IU dadka ka sareeya 100-120 kg
Faahfaahin dheeraad ah, fadlan la xiriir latalahayaga internetka
HGH qiimaha Singapore iyo hababka bixinta
Horumarka hormoonada hormoonka ee Thailand wuxuu bixiyaa hoos u dhigista bukaanka marka loo eego dalalka kale sida Australia, Mareykanka ama Kanada. Bixinta amarkaaga waxaad heleysaa ballanqaad buuxa oo helitaanka hormoonka koritaanka ee albaabka gurigaaga. Macaamiisheena waxaan sidoo kale diyaar u nahay inaan bixinno nidaam lacag bixineed oo dabacsan adigoo u dallacaya heer bille ah
Diiwaanka bil kasta ee hormoonka koritaanka ee Singapore
Tan iyo markii ay ka shaqeyso? Macaamiisha oo dhan ma diyaar u yihiin inay bixiyaan koorasyo ​​hormoon ah hormoonada hormoonada 10-12 mar, inkastoo xaqiiqda ah in iibsashada badani ay ka faa'iido badan tahay khariidado kooban mar kasta.
Waxaan diyaar u nahay macaamiisheena laga bilaabo singapore si ay u sameeyaan qiime go'an ee daaweynta hormoonka koritaanka hormoonada (6 bilood), iyada oo fursadan ikhtiyaariga ah ee bukaankayaga u bixin karo hormoonka koritaanka bil kasta, waa mid habboon oo badbaado leh si loo helo hormoonka koritaanka muhiimka ah bil kasta.
Tusaale ahaan, macmiilku wuxuu u baahan yahay 2 xirmooyinka hoormoonka koritaanka bishiiba - isaga oo kaliya wuxuu bixiyaa 2 xirmooyinka qiimaha ah, wuxuu helaa bil kasta iyo amarro kale oo bisha soo socota wuxuuna bixiyaa xirmooyinka 2 ee hoormoonka koritaanka. Nidaamkani wuxuu ku haboon yahay annaga, macaamiisheena waxaanu abuuraa xidhiidhka aaminka ah ee naga dhaxeeya annaga iyo bukaanada.